ဆင်ခြင်စရာအာဇာနည်နေ့ - Yangon Media Group
ဇူလိုင်လ ၁၉ ရက်နေ့ကို မကြာမီရောက်လာ ပါတော့မည်။ မြန်မာ့သမိုင်းတွင်အလွန်ဝမ်းနည်းဖွယ် ရာကောင်းသောနေ့တစ်နေ့ဆိုလည်း မှားအံ့မထင်။ ဒီ နှစ်ဆိုလျှင် နှစ်ပေါင်း(၇၁)နှစ်တိုင်ခဲ့လေပြီ။ လူ့ဘဝ သက်တမ်းတစ်ခုစာမျှသာ၊ ဒါတောင် အသက်ရှည် ရှည်နေခဲ့ကြသူတွေအတွက် သက်တမ်းတစ်ခု။ ခု ခေတ်ကအသက်တွေတိုတိုနဲ့ နေကြရတာများနေ တာ။ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းအစဉ်အလာမပျက် ဝမ်းနည်း မှု၊ ဂုဏ်ပြုမှုအဖြစ်နှင့်ကျင်းပလာခဲ့ကြသည်။
သမိုင်း မှတ်တမ်းကောင်းသူ၊ နိုင်ငံတော်အတွက် နိုင်ငံ့တာ ဝန်ကို မှန်မှန်ကန်ကန် ပကတိရိုးသားစွာထမ်းရွက် လာသူတွေအတွက်က တစ်နိုင်ငံလုံးဝမ်းနည်းပူဆွေး ကြရသည်။ သားကောင်းရတနာတွေဆုံးရှုံးကြသဖြင့် နှမျောကြတာပေါ့။ လူသာသေသည် နာမည်မသေ သောသူများဖြစ်ကြသည်။
တချို့တွေ ကွယ်လွန်သွားတာ သူတို့မိသားစုအ တွက်ကတော့ အားထားရသူတစ်ဦးဆုံးရှုံးသွားလို့သာ။ တစ်တိုင်းပြည်လုံးက ဝမ်းနည်းစရာမရှိပါဘူး။ ဟော.တချို့ကကွယ်လွန်လို့သာသွားတယ်။ သူ့ မိသားစုကဝမ်းနည်းတာ သိပ်မတွေ့ရဘူး။ မတွေ့ဆို သူက မိသားစုအပေါ် ဒုက္ခဆင်းရဲတွေေ ပးလွန်း လို့၊ အားလုံးစိတ်တောင်ချမ်းသာနေကြတာ၊ မပြောကောင်း မပြောအပ်လို့သာ။ အတူနေခဲ့ဖူးသည်ဆိုသော ခံစား စိတ်လောက်သာရှိတာ။ ကျန်တာသိပ်ပူဆွေးစရာမ ရှိပါဘူး။ နောက်တစ်ဦးကတော့ ကွယ်လွန်သွားတာ တောင်လူမသိ၊ သူမသိ။ အသိလည်းမပေးရဲ၊ လူတွေ ဝမ်းသာကြပြီး ပျော်ပွဲသဘင်တောင် ကျင်းပသွား မှာ။ အဲဒါကသမိုင်းမှတ်တမ်း အမည်းစက်ကြီးကြီးချန် ထားခဲ့သူတွေပေါ့။ အဲဒီတော့ လူတစ်ယောက်၏တန်ဖိုးကို ထိုသူသေမှသာသိဆိုသလိုသိခွင့်ရပါသည်။ တချို့များ လူတောင်မသေသေးဘူး၊ နာမည်ဆိုးတွေ ကိုထွက်လို့၊ ကိုယ့်သမိုင်း ကိုယ်လှချင်လျှင်တော့ မသေ ခင်လေး Óဏ်ဦးအောင်ကျင့်ကြံနေထိုင်ကြပါစို့လား။
ဒီတော့ လူတစ်ယောက်ကကောင်းသလား၊ ဆိုး သလား။ သူကွယ်လွန်ချိန်ရောက်မှအဖြေထွက်ပါ သည်။ ကောင်းတာလုပ်လျှင်ကောင်းတာခံစားရမှာပေါ့။ ကျွန်ုပ်တို့သည်သမိုင်းမှာ အမည်းစက်မထင်ဖို့လိုပါ သည်။ လူတော်မဖြစ်ချင်လျှင်နေပါစေ၊ လူကောင်း မဖြစ်ချင်နေပါစေ၊ အရေးကြီးသည်မှာ လူယုတ်မာ မဖြစ်ဖို့ အဓိကပါ။ လူတစ်ယောက်သက်ရှိထင်ရှားရှိ နေစဉ်မှာ အဲဒီလူလုပ်ဆောင်ချက်ကောင်း၊ မကောင်း သိနိုင်သည်။ သို့သော်မဝေဖန်ရဲပါ။ အဲဒီလူကအာ ဏာရှိနေတာဆိုတော့ ဟုတ်မှာပေါ့။ သို့သော် အနှီ ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကွယ်လွန်သွားသောအခါမှာ သူအတွက် ရောင်ပြန်ဟပ်တတ်သည်ကို သတိပြုဆင်ခြင်စရာ များကို အာဇာနည်နေ့ရောက်တိုင်း တခြားသူတော့ မသိ၊ ကျွန်ုပ်ကတော့ သတိပြုဆင်ခြင်မိတာတော့ အ မှန်ဖြစ်ပေသည်။ တစ်ဆက်တည်းခေါင်းဆောင်ကောင်း ဆုံးရှုံးသွားပြီးနောက် ဖရိုဖရဲ ဖြစ်တတ်ကြောင်း လေ့ လာမိပါသည်။ သို့မို့ကြောင့် ခေါင်းဆောင်ကောင်းကို လက်ဝယ်ရရှိနေစဉ်မှာ တန်ဖိုးထားဖို့၊ ချစ်ခင်လေးစား ဖို့၊ ခေါင်းဆောင်ကောင်းတစ်ယောက်ရရှိစဉ်မှာ ကိုယ် လည်း နောက်လိုက်ကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့လို ကြောင်းသတိပြုဆင်ခြင်မိပါသည်။ အဆုံးစွန်ဆုံး ပြောရလျှင် နောက်လိုက်ကောင်းမဖြစ်လျှင်တောင်ကဏန်းလို ကန့်လန့်မတိုက်ဖို့တော့ လိုပါသည်။ ကောင်း မွန်သောအရွေ့ကိုသွားနေစဉ်မှာ အနှောင့်အယှက်လုပ် ခြင်းသည် လူသားအားလုံး၊ မြန်မာပြည်တွင်းမှီတင်း နေထိုင်ကြသော ပြည်သူအားလုံး၏ဘုံရန်သူဖြစ်သွား တတ်ပါသည်။
လူ့သဘောကို အနည်းငယ်ဆန်းစစ်မိပါသည်။လူတို့သည် တန်ဖိုးထားအပ်၊ မထားအပ်ဆိုတာကို မသိတာလား၊ မသိချင်ယောင်ဟန်ဆောင်နေတာလား၊ သို့မဟုတ် တမင်ကိုကန့်လန့်တိုက်ကိုယ်ကျိုး စီးပွားထိခိုက်မှာစိုးလို့လားတော့ မပြောတတ်။ ခေါင်း ဆောင်ကိုတန်ဖိုးထားဆက်ဆံ ရကောင်းမှန်းမသိ၊ အဲဒီလူတော်တွေဆုံးရှုံးပြီဆိုတော့မှ၊ ချစ်လှပါရဲ့၊ လွမ်း လှပါရဲ့ဆိုပြီး လုပ်ပြကြသူတွေများသား။ ခေါင်းဆောင် ကောင်းကိုတန်ဖိုးထားသည်၊ လေးစားသည်ဆိုလျှင် သေသူကိုပြန်လည်ရှင်သန်အောင်လုပ်လို့လည်းမရ၊ ကိုယ့်အသက်နှင့်အလဲအထပ်လုပ်ပါရစေဆိုလည်း မရနိုင်။ လွမ်းလှပါသည်ဆိုပြီး ငိြုေ<ွကးနေလို့လည်း သေသူက ပြန်မရှင်နိုင်။ သေသူကိုသတိရလှပါသည်။ တန်ဖိုးထားလှပါသည်ဆိုပြီး သူ့အုတ်ဂူရှေ့ နေ့တိုင်း သွားရှင်းနေတာ၊ ပူဆွေးပြနေလည်းအကျိုးမရှိ၊ သူ့ကို ချစ်လျှင် သူ့ကိုလေးစားလျှင် သူချမှတ်သည့်လမ်းစဉ် ကိုလိုက်နာလိုက်လုပ်ကြရုံသာရှိပေလိမ့်မည်။ သို့မှ သာ ခေါင်းဆောင်ကောင်းတို့က ကျေနပ်နိုင်ပါလိမ့် မည်။ ခေါင်းဆောင်ကောင်းတို့ကပူဆွေးနေတာ၊ လွမ်း ဆွတ်ပြနေတာထက် သူတို့၏နိုင်ငံချစ်စိတ်၊ အနစ်နာ ခံစိတ်တွေကိုဂုဏ်ပြုရာရောက်ပါလိမ့်မည်။ သူတို့လို ချင်သောအရာသည်လည်း ပြည့်စုံပါလိမ့်မည်။
ဗိုလ်ချုပ်တွင် အတွင်းစိတ်က နိုင်ငံကြီးသားအလွန်ပီသခြင်းသာဖြစ်ပေသည်။ နိုင်ငံကြီးသားစိတ်ဆို သည်မှာ လူလူချင်းတန်ဖိုးထားသောစိတ်ဖြစ်သည်။လူလူချင်းတန်ဖိုးထားသောစိတ်သည် လူတိုင်းတွင် မရှိနိုင်၊ လူ့ဘောင်လူ့လောကတွင် နေထိုင်သူချင်း တန်ဖိုးထားသော စိတ်ဓာတ်သည် လူတိုင်းတွင် မရှိနိုင်။ ဆိုကြပါစို့ ကိုယ်တစ်ဦးတည်းက ရယူပိုင်ဆိုင် လိုခြင်း၊ ကိုယ်ကဦးနှင့်လျှင် ဦးသူအပိုင်ယူခြင်း၊ ကိုယ် ကရာထူးကြီးကြီးရှိသူဆိုပြီး လက်အောက်ငယ်သားအ ပေါ် ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်း အလျဉ်းမရှိ။ အရာရာသည် သင်္ခါရသဘောဆိုသည်ကို နားလည်သဖြင့် မက်မော တွယ်တာစိတ်မရှိခြင်းစသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ အဲဒီ တော့စည်းကမ်းကို တန်ဖိုးထားခြင်းသည် ဗိုလ်ချုပ်၏အတွင်းခံစိတ်ဓာတ်ကောင်းဖြစ်သည်။ စည်းကမ်းမဲ့ ဆေးရိုးသည်က လမ်းပေါ်တက်ဆေးရိုးလှန်းသောဟင်္သာတသွားပြောစကားသည်လည်းကောင်း၊ အောင် ပန်းဖြင့်နီးသဖြင့် ဘဝင်မြင့်ကြပြီးြ<ွကားချင်သဖြင့် လှော်တက်ကို ပန်းတိုင်ဝင်သည်အထိ ဆက်မလှော် သောလှေပြိုင်ပွဲကိုမြင်ပြီး ဆုံးမခြင်းသည်လည်း ကောင်း၊ နောက်ဆုံးမှပန်းဝင်တော့မည့်သူက နောက် ဆုံးဆိုပြီး လက်လျှော့ကာ ဆက်ပြီးမလှော်ခပ်ခြင်းကိုလည်းကောင်း မြင်တွေ့ပြီ။ြ<ွကားချင်ကြသော ပြည်သူတွေ၊ ပန်းတိုင်ကိုအရောက်သွားမည်ဆိုသော ဇွဲစိတ်မရှိသူတွေသည် စည်းကမ်းမဲ့ခြင်း၏အမူအ ကျင့်ဖြစ်ပေသည်။ စည်းကမ်းရှိသူသည်တိတိကျကျ လိုက်နာလုပ်ဆောင်တတ်ကြပါသည်။ ပန်းတိုင်မရောက် မချင်းဇွဲမလျှော့သင့်ပါ။ မအောင်မြင်သောအခါ ဖရို ဖရဲဖြစ်ခြင်းသည် စည်းကမ်းမဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ပန်းတိုင် ဝင်မှာပဲ ကိုယ်သာအနိုင်ရမှာပဲဆိုပြီး ဘဝမြင့်ခြင်းသည် စည်းကမ်းမဲ့ခြင်းမည်သည်။
ပြောရမည်ဆိုလျှင် လူတချို့သည် အောင်မြင်မှု အနည်းငယ်ရလာရုံမျှနှင့် တခြားသူကိုတောင် အမီ လိုက်မည်။ ကိုယ်ကနှစ်နှစ်လောက်နောက်ကျနေပြီ။ ကိုယ့်ထက်ရှေ့ရောက်နေသူကိုတောင် စိန်ခေါ်နေပြီ။ ဒီတော့ ဗိုလ်ချုပ်ကပြောပါသည်။ စည်းကမ်းမဲ့နေ သည်ကိုသိလို့ပြောပါသည်။ ကမ္ဘာကြီးက ရပ်တန့်မ နေ အမြဲပြောင်းလဲနေပါသည်။ လိုက်လျောညီထွေ ပြောင်းလဲဖို့လိုသလို၊ လွတ်လပ်ရေးမှာပါဝင်ကြိုးပမ်း ရွက်ဆောင်ခဲ့ကြသော အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်များ အား လေးစားချစ်ခင်ရိုသေးကြလျှင်ဖြင့် သူတို့လောက် မစွမ်းနိုင်။ အသက်ပေးပြီး နိုင်ငံ့တာဝန်ကို မထမ်း ဆောင်နိုင်တောင်မှ ကန့်လန့်တိုက်၊ တိုက်ခိုက်ဖို့မသင့် ပါ။ ဗိုလ်ချုပ်နှင့်အပေါင်းပါတစ်စုတို့၏လွတ်လပ် ရေးရအောင် ကြိုးပမ်းခဲ့ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ပြည်သူ တွေက လွတ်လပ်ရေးအတွက် နောက်ထပ်တိုက်ပွဲ ဝင်ရန်မရှိသောလည်း သူတစ်ပါးတို့၏ကျူးကျော် လာမှုမဖြစ်ရအောင် စည်းလုံးကြဖို့လိုသလို၊ ပြည်သူ ပြည်သားတို့၏ စားဝတ်နေရေး၊ အကျိုးစီးပွားများကို အချင်းချင်း ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့လိုပါသည်။ ဒါသည်လည်း နယ်ချဲ့လက်အောက်မှလွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုလောက်မခက်ခဲပါ။ လွတ်လပ်ရေး ကြိုးပမ်း ရာတွင် တစ်ဦးတစ်ယောက်နှင့်မရနိုင်။ သွေးချင်းညီ နောင်သားချင်းများလည်း ပါဝင်ကြသည်ကို သမိုင်း မှာ အထင်အရှားရှိနေပါသည်။ ဗိုလ်ချုပ်လက်ထက် တုန်းက လူမျိုးခြားကျုးကျော်လာသူကို တိုက်သော တရားသောစစ်ပွဲ၊ ယနေ့ကာလဖြစ်နေသောစစ်ပွဲ သည် ညီနောင်သားချင်းတို့ အချင်းချင်းတိုက်နေ သော စစ်ပွဲ၊ သို့အတွက်ကြောင့် တိုင်းရင်းသားအား လုံးငြိမ်းချမ်းရေးရလိုသည်မှာ ဗိုလ်ချုပ်၏ဆန္ဒဖြစ်ပါ လိမ့်မည်။ သွေးချင်းတွေဘေးကင်းစေချင် တာလည်း ဗိုလ်ချုပ်ဆန္ဒပါ။ လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုမှာ သွေး ချင်းညီနောင်များ အားသည်လည်း တစ်တပ်တစ် အားမဟုတ်ပါလား။ စည်းကမ်းမရှိ၊ စည်းလုံးမှုမရှိခြင်း ကြောင့် မတိုးတက်နိုင်ဘူးလို့ ပြောနိုင်ပါသည်။
ဗိုလ်ချုပ်တို့အား လုပ်ကြံမှုတွင် တချို့ကပြည်ပ ကသွေးခွဲတာဆိုပြီး အပြစ်တင်ကြသည်။ နယ်ချဲ့တို့ ယုတ်မာသည်ဟုပြောကြသည်။ တကယ်တမ်းက တော့ အသိÓဏ်မဲ့မှုကြောင့်ဖြစ်ရတာပါ။ မြှောက် ပေးတိုင်းလုပ်ရအောင် ကလေးတွေမှမဟုတ်။ အထင် မြင်လွဲပြီးဖြစ်ရခြင်းနှင့် အာဏာငမ်းငမ်းတက်လို့သာ ဖြစ်ရတာ။ နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေကို မမြင်နိုင် လောက်အောင် မျက်ကန်းတစ္ဆေဖြစ်ခဲ့ရတာ။ မိသား စုတစ်စုကိုမျက်ရည်ကျစေခြင်း၊ ဒုက္ခရောက်စေရုံမက ပဲ ပြည်သူတစ်ရပ်လုံး၏ မျှော်လင့်ချက်ရောင်ခြည်ကို မှေးမိန်အောင်လုပ်ခြင်းမည်ပေသည်။ ပြုသူအတွက် ရော ပေးဆပ်ခြင်းများစွာဖြစ်ရုံမက ကျန်ရှိသော မိသား စုအတွက်ပါ မျက်နှာငယ်ရသည်မဟုတ်ပါလား။ ပြုသူ အတွက်ကလည်း သမိုင်းတစ်လျှောက်နာမည်ပျက် ခဲ့ရသည်မဟုတ်ပါလား။ နာမည်ကောင်းရသူက ဆက်လက်ပြီး နာမည်ကောင်းရနေသလို၊ နာမည်ဆိုး ဖြစ်သူသည်လည်း ဆက်လက်ပြီး နာမည်ဆိုးဖြစ်နေ ဦးမှာ။ သမိုင်းအမွေကိုလူတွေလက်ဆင့်ကမ်းသယ် နေသရွေ့ ဖြစ်နေမှာပင်။ ကမ္ဘာကြီးအစိတ်စိတ်အမြွှာ မြွှာကြေပျက်သွားပြီဆိုမှသာ ဒီသမိုင်းကအပြီးတိုင် ပျောက်ပျက်သွားမှာ။ ထိုသို့သော သင်ခန်းစာကိုယူ ပြီး လူတွေဆင်ခြင်သင့်ပါသည်။ တချို့များ အာဇာနည် ခေါင်းဆောင်တို့ကို မှေးမှိန်အောင်၊ ပြည်သူတွေမေ့ ပျောက်အောင်လုပ်ကြသည်။ သို့သော် ကံကံ၏အကျိုးကြောင့် ထင်ပါသည်။ ထိုသူများသာနာမည်ဆိုးတွင်ခြင်းကို ခံရပါသည်။
ဂုဏ်ပြုထိုက်သူကို ဂုဏ်ပြုခြင်းသည် မင်္ဂလာ တစ်ပါးမဟုတ်ပါလား။ အပြစ်မဲ့အနစ်နာခံသူတွေကို မှေးမှိန်အောင် ဖော်ဆောင်ခြင်းဖြင့် မိမိသာအကျိုး ယုတ်သည်ဆိုသည်ကို နှောင်းလူတို့သင်ခန်းစာယူ သင့်ပါသည်။ သမိုင်းတရားခံမဖြစ်ကြစေဖို့ လိုအပ် သည်မဟုတ်ပါလား။ ။
သရုပ်ဆောင်သီဟတင်စိုးအမှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး တိုင်ကြားသူ အိမ်အကူနှင့် ပွဲစားကို စတင်စစ်ဆေး
ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် တည်ငြိမ်မှု ထိန်းသိမ်းရေး၊ စီးပွားရေးကောင်းမှဖြစ်မည်၊ ငြိမ်းချမ်းရေး
စန္ဒကူးနံ့သာကျောင်းတော်ရာ စေတီတော်မြတ်ကြီးအား စတီးရွှေသင်္ကန်း ကပ်လှူခြင်းနှင့် ဘက်စုံပြုပြ??
မွန်ဂိုလီးယားနိုင်ငံမှ အမဲလိုက် လင်းယုန်ဟု ယူဆရသော လင်းယုန်တစ်ကောင် မင်းကင်းမြို့နယ် တော??
ရန်ကုန် မြို့တော်ဘဏ်၏ နိုင်ငံခြားဘဏ် လုပ်ငန်းအတွက် ရင်းနှီးလျာထားငွေ ကျပ်သန်း ၆၈ဝဝ တောင်း??